Ekhazimlayo ecocekileyo ye-SoMa Flat Kufuphi neZiko leNgqungquthela, eDolophini
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguSusannah
Eli khaya LICACILE ELICACILEYO kwaye lifakwe iintsholongwane ngokupheleleyo kundwendwe ngalunye--jonga nje uphononongo lwethu! Iziko lenkomfa likhulu laseSan Francisco kukuhamba ngemizuzu eyi-15 ekhawulezayo, iyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla emva kosuku olude lonxibelelwano. Iitoni zeendawo zokutyela, iivenkile zekofu, iimarike kunye nobomi basebusuku kanye ngaphandle nakwindawo ezingqongileyo. Ngaphakathi, zipholela nge-minimalist ye-rustic vibes yale mihla kunye noomatrasi benkumbulo eyongezelelekileyo kuyo yonke ibhedi (kunye ne-memory foam ikhupha i-Queen+ couch!). Le yeyona ndawo ifanelekileyo yotyelelo lwakho olulandelayo kwi-SF, nokuba yeyeshishini okanye ulonwabo!
Eli khaya LICACILE ELICACILEYO kwaye lifakwe iintsholongwane ngokupheleleyo kundwendwe ngalunye--jonga nje uphononongo lwethu! Iziko lenkomfa likhulu laseSan Francisco kukuhamba ngemizuzu eyi-15 ekhawulezayo, iyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla emva kosuku olude lonxibelelwano. Iitoni zeendawo zokutyela, iivenkile zekofu, iimarike kunye nobomi basebusuku kanye ngaphandle nakwindawo ezingqongileyo. Ngapha…
Ifeni esesilingini, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, I-King bed, I-Netflix, I-TV, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Umatrasi omamfu-mamfu
Ibhedi ekwayisofa, I-Murphy bed, I-Queen bed, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Umatrasi omamfu-mamfu
4.89 (iingxelo zokuhlola 19)
Ibekwe kwisitalato esibanzi, esinemithi enqumla kwipaki yoluntu entliziyweni edlamkileyo ye-SoMa, iflethi ihamba umgama ukuya kwi-Union Square kunye neMid Market Corridor ehamba phambili. Hamba ngamanyathelo nje ukufikelela kwiindawo zokutyela ezininzi, kwaye uhambe uye kwiziko lenkomfa eliphambili kumcimbi wemizuzu.
Umgama ukusuka eSan Francisco International Airport
Inombolo yomthetho: STR-0003257
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Francisco